Yese Lenovo Thinkpad akateedzana achave neUbuntu rutsigiro sePamberi OS | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memakore ekuva mudiwa weMicrosoft, Lenovo afunga kujoina Linux zvimwe uye mushure maizvozvo zvichatanga tengesa mamwe malaptop ane Ubuntu uye Red Hat, zvino zivisa kuti iwezvese zvishandiso zvemakateedzana Thinkpad uye ThinkStation zvichagoverwa neUbuntu sepamberi-kuiswa.
Izvi zvishandiso zvichave zviripo neUbuntu pre-yakaiswa mumashure gore rino. Chinangwa ndechekuti kwegore rinotevera ese mamodheru ekutengesa anotevedzera iyi patani.
Ehe saizvozvo, izvi hazvireve kuti mugadziri anomira kushandisa Windows, zvinongoreva kuti Ubuntu ichave imwe nzira. Nenzira iyi, vatengi vanogona kusarudza Ubuntu kana Windows isiri yavo yekuda.
Izvo zvinopera pasina kutaura kuti Canonical, iye musiki weUbuntu, anofara nechiziviso, kunyanya sezvo huwandu hwezvigadzirwa zviripo neBuntu seyakafanogadzirirwa mashandiro esisitimu inokura mazuva ese. Pakupedzisira, Ubuntu yave kuve yakanakisa sarudzo kune Windows neCanonical inoenderera ichirwira kurwa neMicrosoft pane akawanda mafonti.
Aya anotevera maLenovo mamodheru achave achiwanikwa neUbuntu seyakafanogadzirwa-inoshanda sisitimu:
ThinkPad T14 (Intel uye AMD)
ThinkPad T14s (Intel uye AMD)
ThinkPad X13 (Intel uye AMD)
ThinkPad X1 Yakanyanyisa Gen 3
ThinkPad X1 kabhoni Gen 8
ThinkStation P340 dikidiki
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Yese Lenovo Thinkpad akateedzana achave neUbuntu rutsigiro sePre-yakaiswa OS
Kunyangwe Canonical iri kambani, zvakatora makore kuti vagadziri vehardware vafunge kutengesa makomputa neLinux-based operating system senge Ubuntu.
Iyo Thinkpad renji ndeye mugari wenhaka kune IBM malaptop uye yakanangana nehunyanzvi, saka zvakakosha kuti Lenovo atende kuti ine musika wekutengesa makomputa aya neUbuntu kune chikamu chevatengi vayo.
Kuvapo kweLinux-based operating system iri kupedzisira yave yakajairika, kunyangwe kana iri yevashoma.